Ciidamada Booliska UK Oo Salaanta Haleeyada U Taagay Ciyaartoyga Manchester United Markii Ay Kasoo Dageen Diyaaradda – Latest Sports News
Ciidamada Booliska UK Oo Salaanta Haleeyada U Taagay Ciyaartoyga Manchester United Markii Ay Kasoo Dageen Diyaaradda
Ciyaartoyga iyo shaqaalaha tababarka Manchester United ayaa wax aanay filaynin kula kulmay garoonka diyaaradaha ee magaalada Manchester kaddib markii ay kasoo laabteen Paris oo ay guul kala soo laabteen.
United ayaa guul 3-1 ah kasoo gaadhay PSG, waxaanay sidaas ugu soo gudbeen wareegga siddeed dhamaadka UEFA Champions League, waxaana markii ay ku laabteen magaaladoodii Manchester loogu soo dhaweeyey sida halyeeyada.
Laba gool oo uu Romelu Lukaku u dhaliyey iyo midka saddexaad oo rikoodhe ahaa oo uu saxeexay Marcus Rashford ayaa tababare Ole Gunnar Solskjaer siisay guushii 14aad ee 17 ciyaarood oo uu hayey shaqada tababarenimo ee Man United, waxaana uu guul-darro la kulmay hal ciyaar oo kaliya oo ahayd lugtii hore ee PSG ee ay Old Trafford ku martigeliyeen.
Sida uu qoray wargeyska The Sun ee kasoo baxa UK, ciidamada booliska ee ku sugnaa garoonka diyaaradaha ayaa si aan hore loogu baranin salaan ugu taagay ciyaartoyga iyo tababareyaasha la socday.
Ciidamada booliska oo muujinaya sida ay halyeeyo ugu arkaan kooxdan, ayaa waxay qaarkood mid mid u gacan qaadayeen ciyaartoyga, halka kuwo kalena ay dhinacyada dariiqa taagnaayeen iyagoo sacab u tumaya.
Sacabka oo ah salaanta rayidku taageerada iskugu muujiyaan, ayaa waxa ciidamada booliska qaarkood ay sawirro la galeen ciyaaryahannada, waxaana la arkayey sarkaalka lagu magacaabo Mike Phelan oo isku dhajinaya Sir Alex Ferguson oo talooyin iyo waayo-aragnimo ku caawiyey xiddigaha kooxda xilligii nashada.
Victor Lindelof oo ahaa halyeygii khadka dambe ee difaaca hayey ee xakameeyey Kylian Mbappe ayaa ay kusoo xoomeen dersin ciidamada booliska ah oo sawirro la galay, halka kuwo kalena ay u sacbiyeen.
Manchester United oo isku diyaarin doonta ciyaarta ay Axadda martida ugu noqonayaan Arsenal ee tartanka Premier League ayaa waxa dareenka farxadeed la wadaagay jamaahiirteeda gudaha iyo kuwa dibedda oo u arkayey inay bandhig mucjiso ah muujisay.